Maninona ireo bilaogera no loza mitatao ho an’ny governemanta etiopiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2019 7:17 GMT
Avy amin'i Beza Tesfaye. Tao amin'ny tranonkala Africa is a Country no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity.
Ny fanoratana ireto andàlana ireto dia toa mampahatsiahy ahy amin'ny fomba mampalahelo tokoa hoe tao Etiopia, mety hanokatra làlana hitondra anao any am-ponja ny fanehoana hevitra.
Ny 25 hatramin'ny 26 Aprily 2004, Etiopiàna biloagera sy mpanao gazety niisa sivy no voasambotra. Raha eo am-pankalazana indrindra ny Andro ho an'ny Asa Fanaovana Gazety isika, ireto farany kosa voatazona any amin'ilay toby foibe malaza fanaovana fanadihadiana ao Addis Abeba. Na tsy mbola voaheloka aza, helohina ho “miaraka miasa aminà mpiaro zon'olombelona avy any ivelany” sy “mampiasa ny tambajotra sosialy havily ho any amin'ny fanakorontanana ny firenena” ilay vondrona. Raha hisy ny fanenjehana ampiasàna ilay lalàna miteraka resabe ao Etiopia nataony hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana, mety hihatra amin'ireo voampanga ny sazy fanamelohana ho faty.
Tafiditra anatin'ny fironana mampiahiahy misy ao Etiopia ireny fisamborana ireny, firenana iray voasokajy matetika ho mpanitsakitsaka ny fahalalahana raha vao fahalalahan'ny asa fanaovana gazety no resahana. Araka ny lazain'ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety, Etiopia no firenena iray ahitàna mpanao gazety betsaka indrindra mandositra ny fireneny [rohy amin'ny teny anglisy]. Ho an'ireo misafidy mijanona kosa, zavatra tsy maintsy iomànana ny mety ho henjehina noho ny resaka fampihorohoroana rehefa manakiana ny governemanta izy ireo. Tamin'ny 2009, rehefa noresahana ny Fanambaràna ny ady amin'ny asa fampihorohoroana, izay sady midadasika no manjavozavo ihany koa, nanaitra toy izao ny Human Rights Watch :
“Raha lany amin'izao endriny izao ilay drafitra, dia hanome fototra iray araka ny lalàna ho an'ny governemanta etiopiàna mba hanànany fitaovana iray azony hikapàna izay fitondrantena rehetra manohitra ny heviny, tafiditra amin'izany ireo hetsipanoherana am-pilaminana na fanakianana imasombahoaka ny fepetra avoakan'ny governemanta, izay tsaraina ho manome tohana ho an'ireo hetsika mitam-piadian'ny mpanohitra”
Hatramin'ny nandaniana ilay lalàna, nifanaraka tsara tamin'izay novinavinain'ireo hetsika mpiaro zon'olombelona ny fiantraikany mivantana. Efatra taona latsaka monja, 200 ny olona voasambotra tamin'ny anaran'ilay lalàna miady amin'ny asa fampihorohoroana. Maherin'ny 35 ny mpanao gazety sy mpitarika ny fanoherana nohelohina ho nanao asa fampihorohoroana.
Ny farany tamin'ireo niharan'io politika famoretana io dia toa tanora enina mpikatroka, mpikambana anaty vondron'ireo bilaogera, antsoina hoe Zone 9, sy telo mpanao gazety koa. Toy ny maneso ilay daty nisamborana azy ireo izay nifanandrify tamin'ny fitsidihan'ny Sekreteram-panjakàna amerikàna, John Kerry, izay naneho ny ahiahiny momba ilay vondrona nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety. Nisy hetsipanehoana hatezerana nihanaka haingana dia haingana tety anaty tambajotra sosialy; na Facebook io, na Twitter ary hatrany anatin'ny tranonkala tumblr aza. Ao amin'ny bilaogy Zone 9, mbola azo vakiana ao ny teny filamatr'ireo mpanoratra ao aminy : “Mibilaogy izahay satria mahatsapa ho manana adidy”.
Tamin'ireo mpanao gazety nosamborina tamin'ny herinandro lasa, isany i Tesfalem Waldeys, mpanangombaovao tsy mitandro hasasarana, nisy fotoana efa nanao asan'ny toniandahatsoratra tao amin'ilay gazety malaza Addis Neger. Io no gazety isan'ny voalohany indrindra nikatom-baravarana taorian'ny nampiharana ilay lalàna miady amin'ny asa fampihorohoroana. Raha nandositra niala ny firenena ny maro tamin'ireo niaraka niasa taminy tao amin'ny Addis Neger, i Tesfalem kosa nijanona ary nifofotra sy nahazo laza amin'ny maha-mpanao gazety miasa tena, manana traikefa sy manana ny hajany.
Tamin'ny 2012, nanoratra lahatsoratra iray i Tesfalem, nomeny lohateny hoe :”Rehefa lazaina fa asa fampihorohoroana ny asa fanangonambaovao”. Soritany ao anatiny ny fiantraika manangoly entin'ilay lalàna miady amin'ny asa fampihorohoroana ho an'ny asa fanaovana gazety ao Etiopia:
“Mihanaka eny anivon'ireo Etiopiàna mpanao gazety ny tahotra sy ny fanivànana ny tena. Marobe ireo rahalahiko mpanao gazety no very fanantenana. Tsy misy hitan'izy ireo afa-tsy ny faravodilanitra tsentsina ho an'ny asany. Manontany tena ny sasany sao tokony hanao sesitany ny tenany. Ny vitsy amin-dry zareo mba nitafàko dia miomana daholo ny ho voasambotra ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy misy mahafantatra na iray aza hoe iza indray no manaraka ao anatin'ny lisitra”.
Angamba i Tesfalem mitandrina loatra amin'ny fanangonany vaovao ary manokan-tena be miaraka amin'ny firehetampo fatratra ho an'ny asany ka dia tsy afaka nieritreritra akory hoe, indray andro any, mety ho izy no manaraka ao anatin'ilay lisitra. Raha fomba fiady am-pahamalinana ny fidirana ho ao anaty rafitra sy manova azy avy ao anatiny ho fampandrosoana ny zavatra rehetra, ao Etiopia – toerana iray nanamboarana ny lalàna ho an'ireo mpanao politika manao fiavin'ny tafara – tsy misy antony hahafahana mino hoe ny fitondrantena mendrika asehonao dia hiaro anao tsy ho voasambotra fahatany. Any aoriana any, ny fepetra tahaka ireny dia hamadika, na dia ireo tena resy lahatra amin'ny fandalàna ny tolona atao am-pilaminana aza, ho lasa radikaly. Raha ny marina, amafisin'io lalàna natao hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana io ny fanoherana.
Ho ahy dia mampikorontan-tsaina ny hoe governemanta iray mieboebo amin'ny fanànana fandaharanasam-piarovana iray feno sy be pitsopitsony ao Afrika atsimon'i Sahara no mandray ny vondrona bilaogera iray sy mpanao gazety ho toy ny loza mitatao. Raha efa nihanaka be ny fampiasàna tambajotra sosialy, toy ireo any amin'ny firenena nitrangan'ny Lohataona Arabo, na raha efa mora koa ny fahafahana nahazo ireo gazety tsy miankina any amin'ireo faritra tsy mbola tafiditra ho tanandehibe, dia izay no tokony hisy zavatra ilàna fieritreretana. Fa anaty firenena iray izay 1,5% monja amin'ny vahoaka no mampiasa aterineto ary 61% amin'ny vahoaka tonga taona no tsy mahay mamaky teny sy manoratra, dia tena sarotra ho an'ireny mpanoratra ireny ny hieritreritra fomba iray hanakorontanana ny firenena.
Farany, ny famoretana nitranga vao haingana teo dia manaporofo hatrany fa atahoran'ny governemanta mandrakariva ireo hevitra vaovao, satria mifanamby amin'ny tsy fihetsehan'ny zavamisy, sady ananan'izy ireny ny fahefana hihitatra toy ny valanaretina ary tsy vitan'ny famonjàna ny hanafoana azy.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny tantaran'i Etiopia dia tantaranà fisandratana sy fandrosoana. Na ohatra aza isika tokony haneho fankasitrahana rehefa ilaina izany, nahoana no tsy azo ekena ny fitakiana hanaovana izany misimisy kokoa? Inona no maharatsy ny itakiana Fanjakàna tàn-dalàna ? Ary ny zon'olombelona ? Ny fifidianana malalaka sy tsy mitanila ? Rehefa maneho hevitra amin'ny filàna demaokrasia ao Etiopia ianao – na any aminà firenena hafa an-dàlam-pandrosoana – avy hatrany dia mivilambilana ny fomba hijeren'ny olona anao, miaraka amin'ny fanoroany hevitra anao tsy hitsabatsabaka amin'ny resaka demaokrasia raha tsy efa nahavaha ny olan'ny fahantrana, ny hanoanana ary ny VIH/SIDA. Fotoana vitsy monja no ilain-dry zareo mba hanosorana anao ho idealista na hanaovany fanamarihana hoe ‘olona voasasa atidoha tamin'ny idealin'ny Tandrefana ianao’ . Fa fomba fanao anatin'ny fahefan'ny zokiolona, ary eo amin'ny tsipika manasaraka azy amin'ny fanavakavahana, ny fiheverana hoe tsy maniry afa-tsy sakafo sy izay tolotra fototrra fotsiny ireo olona mahantra, ireo vahoaka any amin'ny tany an-dalàm-pandrosoana.
Ny loza mitatao hita vatana amin'ireo Etiopiàna bilaogera sy mpanao gazety ary fanahy malalaka hafa dia noho izy ireo mampiditra hevitra radikaly tena vaovao be, hoe firenena iray malalaka kokoa, demaokratika kokoa. Izy ireo no misolo tena ny andian-taranaka misy ireo tanora afrikàna manana fahasahiana mitaky amin'ny governemanta, izay ny loharanon'ny maha-ara-drariny azy dia ny fahantrana mampahory ny vahoaka ao amin'ny firenen-dry zareo. Ity hevitra fisamborana bilaogera sy mpanao gazety ity dia vao mainka hihanaka sy hitohy hiroborobo raha tsy eo ry zareo.